जाडोमा हुन्छ कोलेस्ट्रोल बढ्ने खतरा, कसरी बच्ने ? – News Dainik
जाडोमा हुन्छ कोलेस्ट्रोल बढ्ने खतरा, कसरी बच्ने ?
News desk १३ पुष २०७६, आईतवार ११:२९ स्वास्थ्य प्रतिकृया दिनुहॊस
जाडो याममा बिहान चिसो छ भनेर अल्छि मानेर बस्ने बानी हुन्छ । जाडोयाममा शारीरिक अभ्यास गर्न अल्छी मानेर बस्दा शरीरमा कोलेस्ट्रोल बढ्ने खतरा रहने स्वास्थ्य विज्ञ बताउँछन् । जाडो याममा घाम कम लाग्ने कारण शरीरले भिटामिन डी कम मात्रामा सोस्न पाउँछ ।
नियमित शारीरिक अभ्यास गरेको खण्डमा कलेजो सम्बन्धी समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । मौसम अनुसार खानपिन अलग अलग हुनेकारण शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा घटबढ भइरहन्छ । मोटोपनबाट समस्याग्रस्त र मधुमेहको समस्या भएका व्यक्तिमा ८० प्रतिशतसम्म कलेजो सम्बन्धी रोग लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।
त्यस्तै तपाईँले तपाईँले दैनिक शारीरिक अभ्यास वा योगा गर्ने, बोसो रहित खाना खाने, धुम्रपान नगर्ने, शरीरको तौल बढ्न नदिई कोलेस्ट्रोलको खतराको रोकथाम गर्न पनि सक्नुहुन्छ । कलेजो सफा गर्ने सेलेनियम र अलिसिन तत्वलाई बढाउन लसुनले मद्दत गर्छ । ग्रीन टी पिउँदा पनि शरीरमा रहेको विषाक्त तत्वलाई हटाएर लिभर सफा गर्ने काम गर्छ ।
अघिल्लॊ राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : १८ सदस्य छान्न दुई हजार ५६ मतदाता
पछिल्लॊ गौतम बुद्ध रङ्गशाला निर्माणमा श्रमदान गर्दै प्रहरी